शान्तिको सम्भावना नरहेकाले बन्दुक उठ्न सक्ने: महासचिव किरण – newskiran.com
शान्तिको सम्भावना नरहेकाले बन्दुक उठ्न सक्ने: महासचिव किरण
Posted By : newskiran.com Posted On : 2021-03-15 8:49 am
२ चैत २०७७ काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य किरणले नेपालमा अझै शान्तिको सम्भावना नरहेकाले चाँडै बन्दुक उठ्न सक्ने बताएका छन् ।बन्दुक उठाउँदा हुन्छ के ? क्रान्ति अझैँ पूरा भएको छैन । हामी संघीय जनगणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनका लागि जनवादी क्रान्तिको दिशान्मोख छौं, त्यसैले बन्दुक उठ्न सक्ने बताएका हुन् ।
किरणले विप्लव समूहसँग सरकारले शान्ति सम्झौता गर्नेबित्तिकै शान्तिको युग सुरु नभएको बताएका छन् । आइतबार नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी) जनवर्गीय संगठन/मोर्चाहरुद्वारा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै महासचिव किरणलेले विप्लव समूहसँग सरकारले शान्ति सम्झौता गर्दैमा शान्ति युगको सुरु नभएको बताएका हुन् ।
विप्लवजीहरुले ३ बुँदे सम्झौता गर्ने बित्तिकै शान्तिको युग भनेजस्तो सुरु भएको छैन किरणले भने, यहाँ विभिन्न समस्याहरु छन, जबसम्म सम्पूर्ण समाधान हुँदैन, तबसम्म शान्तिको युग सुरुरु हुँदैन । सत्ताधारी वर्गले जनतालाई शोषण, उत्पीडन, दमन गर्ने यी कम्युनिष्ट नामधारीहरु शहिदको रगतको आहालमा डुबेर सत्तामा जाने, अनि शान्ति कसरी हुन्छ ? शान्तिको युग क्रान्ति गरेपछि आउँछ ।
2021-04-08 newskiran.com 0
सञ्चारमन्त्रीले भने, ‘ प्रहरी माथि भएको आक्रमणको जिम्मा कसले लिन्छ।’
2018-07-20 newskiran.com Comments Off on सञ्चारमन्त्रीले भने, ‘ प्रहरी माथि भएको आक्रमणको जिम्मा कसले लिन्छ।’
2021-03-09 newskiran.com 0